किरात समुदायकाे दसैं : निधारमा सेताे टिका : RajdhaniDaily.com sharethis
संखुवासभा । दसैं भनेकै निधारमा रातो टीका, कानमा जमरा, शरीरमा नयाँ लुगा लगाउने र मीठा–मीठा परिकार खाएर आफन्तसँग भेटघाट गर्दै खुसी साट्दै हर्षाेल्लासका साथ मनाउने चाडका रूपमा परिचित छ । नेपाली समाजमा दसैंका बेला रातो टीका लगाउने चलन छ । तर, रातो टीका कहिलेदेखि लगाउन थालिएको हो, भन्ने इतिहासमा छेउ टुप्पो भेटिँदैन ।
पूर्वका किरात समुदायमा दसैं मनाउने चलन बदलिएको छ । किरात समुदायमा दसैं मनाउने चलन घट्दै गएको उनीहरू बताउँछन् । रातो टीका लगाउने किरात समुदाय अहिले सेतो टीका लगाएर दसैं मनाउँछन् । नेपाली समाजमा धेरैले दसैंमा रातो टिका लगाएर मनाउने चलन छ । तर, संखुवासभाका किराती समुदायले सेतो टीका लगाएर दसैं मनाउने गर्दछन् । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा दसैं मान्ने र नमान्ने दुवै भेटिन्छन् । संखुवासभाका कुलुङ, चाम्लिङ, सोताङ, साम्पाङ राईले सेतो टीका र जमरा लगाएर दसैं मनाउने परम्परा छ । किरात समुदायले कहिलेदेखि सेतो टीका लगाउन थाले भन्ने यकिन नभएको संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका ताम्कुका ७६ वर्षीय चन्द्रबहादुर कुलुङले बताए । रातो टीका सद्भाव, उज्यालोपन, शृंगारको प्रतीक मानिन्छ । किरात समुदाय दसैं र शुभकार्यमा सेतो अक्षताको टीका लगाउँछन् । किरात मुन्धुममा सेतो रङलाई पवित्र र किरातको राष्ट्रिय रङ मानिएको छ ।
त समुदायमा दसैं मनाउने चलन बदलिएको छ । किरात समुदायमा दसैं मनाउने चलन घट्दै गएको उनीहरू बताउँछन् । रातो टीका लगाउने किरात समुदाय अहिले सेतो टीका लगाएर दसैं मनाउँछन्
किरात समुदायमा सेतो टीका लगाउने सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने इतिहास नभए पनि पूर्खाले चलाएको परम्पराका आधारमा सेतो टीका लगाउँदै आएको कुलुङले बताए । पूर्वी नेपालमा लिम्बु जातिले पनि सेतो टीका र जमरा लगाउने परम्परा रहेको मादी नगरपालिका–४ की शान्ता सुब्बाले बताइन् । सेतो टीका पूर्वी पहाडका फाल्गुनन्दले समेत सेता पहिरन र सेतो टीका लगाएको इतिहास छ । किरात समुदायले दसैं, बिहे र शुभकार्यमा समेत टीका लगाउने परम्परा छ । केही वर्षदेखि यहाँको दसैं फेरिएको छ । राई–लिम्बू समुदायमा अहिले दसैंको उल्लास घट्दो छ । सिलिचोङ चन्द्रबहादुर कुलुङका अनुसार कुलुङ राईहरूले वर्षांै अघिदेखि दसैंमा सेतो टीका लगाउने परम्परा रहेको बताए । राई जातिलाई थरी उपनाम दिएको राई समुदायले रैतीलाई दसैंमा मार हान्ने दिन बोलाएर खाना दिने परम्परा समेत भएको बताए । पहिल्लो समय किरात समुदायले दसैंभन्दा उदौली उभौली मान्न थालेको खाँदबारी नगपालिका–४ का नरजित राईले बताए । पिता पुर्खाको पालादेखि नै दसैंमा सेतो टीका र जमरा लगाउने परम्परा भएको उनले बताए । राजा–महाराजाले किरात समुदायमा जबर्जस्ती लादेको चाड भएका कारण दसैं मनाउने किरातहरू घटेको उनले बताए । पछिल्लो समय दसैं मान्ने र नमान्ने दुवै देखिन थालेको उनले बताए ।
दसैंमा मान्यजनबाट टीका जमरा लगाउने र आशीर्वाद लिने चलन छ । टाढा रहेका आफन्तसँग वर्षमा एकपटक भेटघाट गर्ने अवसरका रूपमा दसैंलाई लिइन्छ । अन्नको जमरा राख्ने, नवरात्र सुरु भएपछि घर लिपपोत, सिँगारपटार गरेर चिटिक्क बनाइन्छ । दसैं लागेपछि घर–घरमा मालश्री घन्किन्छ, गाउँ–गाउँमा लिंगेपिङ हालेर ‘धर्ती’ छोड्नेको घुइँचो लाग्छ । पछिल्लो समय धर्म परिवर्तन गर्दै क्रिस्चियनमा लाग्नेको संख्या बढिरहेकाले पनि यो समुदायमा दसैं मनाउनेको संख्या घटेको पाइन्छ । राई–लिम्बु समुदायमा सेतो टीका लगाउने, आफन्तकहाँ टीका थाप्न जाने चलन निकै कम भएको उनीहरू बताउँछन् । तर, किरात समुदायले पनि दसैंलाई उमंग, हर्षाेल्लास, आफन्त भेटघाटको अवसरकै रूपमा लिइरहेको पाइन्छ । सेतो टीकालाई शान्तिको प्रतीक मान्दै किरातले सेतो टीका र बस्त्र (लुगा) लगाउने गरेका छन् ।
यसरी हुन्छ खसी, बोका, भेडा र च्याङ्ग्राको परीक्षण, कसरी चिन्ने खानयोग्य ?
संवैधानिक अंगहरुमा सरकारको छायाँ देखिन नहुने : डा. शेखर कोइराला
सप्तरीका कोरोना संक्रमित दश दिन अघि भारतबाट आएका थिए